वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधनका असर - टिप्स - प्रकाशितः श्रावण १६, २०७५ - नारी
वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधनका असर
वाटरप्रुफअघि वाटर रेसिस्टेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ । वाटरपु्रफ सौन्दर्य प्रसाधन बाक्ला हुने भएकाले वाटर रेसिस्टेन्सले उचित सतह तय गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
सिलिकन मिसावट भएका वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधनबाट टाढै रहनुपर्छ । जनावरको बोसो, विविध तरकारीयुक्त बीउबाट निकालिने तेल मिसाइएका सौन्दर्य प्रसाधनले छालाको छिद्र बन्द गरी मिनरल पास हुने बाटो छेकिदिन्छन् । जसका कारण स्किन एलर्जी हुने, चिरा पर्ने, फुट्ने वा बिबिरा आउने आदि समस्या देखापर्न सक्छ ।
यदि वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने उचित खालको मेकअप रिमुभरमा पनि पैसा खर्चिनुपर्छ ।
–हरेक दिन वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधन प्रयोग गर्नु हुँदैन ।
–वाटरपु्रफ सौन्दर्य प्रसाधन लगाउनुअघि वाटरप्रुफ स्प्रे प्रयोग गर्नुपर्छ ।
के–के पर्छन् वाटरप्रुफ सौन्दर्य प्रसाधनमा ?
–वाटरप्रुफ पाउडर, कम्प्याक्ट, आइस्याडो, आइलाइनर पेन्सिल, वाटरप्रुफ लिपिस्टिक, वाटर रेसिस्टेन्ट
ब्लसर, वाटरप्रुफ आइकलर बेस, वाटरप्रुफलिक्विड आइलाइनर, वाटरप्रुफ मस्कारा, आइलाइनर लिक्विड फाउन्डेसन, अन्डर आइ फुल कभरेज कन्सिलर आदि ।
- ल्याक्मे, नेपाल
फाल्गुन ११, २०७५ - लोटस हर्बलको बेबी प्लस
फाल्गुन ७, २०७५ - अन्तर्राष्ट्रिय सौन्दर्य प्रतियोगितामा नेपाललाई सफलता
फाल्गुन ३, २०७५ - सुपर प्लस साइज मोडललाई अवसर
फाल्गुन २, २०७५ - हेरिटेज पेजेन्टस् २०१९ प्रारम्भ
माघ २८, २०७५ - सुपर प्लस साइज मोडल विजेता सन्ध्या
गर्भवती महिला र होली चैत्र ५, २०७५
किन झर्छ केश ? फाल्गुन २६, २०७५
मोबाइलको ब्याट्री टिकाउने उपाय फाल्गुन १३, २०७५
विपत्मा जनधनको क्षति कम गर्ने उपाय फाल्गुन १०, २०७५
केश झर्नबाट रोक्न माघ ४, २०७५
जाडोमा शिशुको स्याहार माघ ३, २०७५